राजु चौधरी - कान्तिपुर समाचार
चिनी आयात अझै खुलेन
चिनी आयातमा लगाएको परिमाणत्मक बन्देज साउनबाट स्वतः हटे पनि सरकारले परिपत्र गरेको छैन । व्यवसायीका अनुसार परिपत्र जारी नहुँदा आयातमा अन्योल नै छ ।
नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले दैनिक नयाँ रेकर्ड बनाएको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार प्रतितोला ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । महासंघका तथ्यांकअनुसार साउन १ गतेयता प्रतितोला ६ हजार ५ सय रुपैयाँले बढेको छ ।
दूधको मूल्य बढाउने तयारी : किसानले पाउलान् ?
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, डेरी उद्योग संघ र नेपाल डेरी एसोसिएसनले भदौ १ गतेदेखि दूधको मूल्य बढाउन माग गरे । अन्य क्षेत्रमा मूल्य वृद्धिले उत्पादन लागत बढेको जनाउँदै संघले दूधको मूल्य नबढाए अन्दोलन नै गर्ने घोषणा गर्‍यो । व्यवसायीको दबाबपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पनि मूल्य बढाउने पक्षमा छ ।
सिमेन्ट उद्योगीले मूल्य घटाए पनि गुणस्तरमा ठगी गर्दै आएको भेटिएको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागका अनुसार प्रतिस्पर्धाका कारण सिमेन्ट उद्योगीहरूले मूल्य प्रतिबोरा २ सय रुपैयाँसम्म घटाएका छन् ।
भान्सामा पस्नै मुस्किल, १ वर्षमा तरकारीको मूल्य १०९% सम्म बढ्यो
चाडपर्व नजिकिएसँगै उपभोक्ताको भान्सा झन्झन् महँगो बन्दै गएको छ । तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नलगायत अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले नै एक वर्षमा तरकारीको मूल्य १ सय ९ प्रतिशतसम्म बढेको देखाउँछ ।
राजु चौधरीका लेखहरु :
पछिल्लो समय मुलुकभर दैनिक डेढ लाख लिटर दूध अपुग भएको छ । उत्पादित दूध ग्रामीण/स्थानीय तहमै खपत हुँदा सहरी क्षेत्रमा अभाव भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले लौका परीक्षण गरेको ८७ हजार राजश्व दाखिला गर्न पत्रचार गरेको छ । खाद्यले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरक्षण विभागलाई उक्त रकम दाखिला गर्न पचत्रार गरेको हो ।
किन पड्किन्छ सिलिन्डर ?
हाडीगाउँका ४९ वर्षीय कृष्णहरि मर्हजन सपरिवार मनकामना मन्दिर दर्शन गर्न जाने तयारीमा थिए । मध्यरातमै सबै जना उठे । ३ बजेतिर महर्जन किचनमा छिरे । उनले ग्यास अन मात्रै गरेका के थिए, भान्साभरि आगोको लप्का फैलियो । उनी हत्त न पत्त सँगैको कोठामा छिरे । शरीरको आगो निभाए, जलेको कपडा फेरे । छोरीको स्कुटरमा बसेर तुरुन्तै चाबहिलको ओम अस्पताल पुगे ।
नेपाली बजारमा सुनको भाउ प्रतितोला ७० हजार नजिक पुगेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिऔस २७ अमेरिकी डलर बढेर यहाँ भाउ ७० हजार रुपैयाँ नजिक पुगेको हो ।
एक महिनाको अवधिमा साढे ४५ प्रतिशत क्षेत्रमा धान रोपाइँ भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार असार २२ गतेदेखि साउन १८ गतेसम्ममा ४५.५ प्रतिशतले रोपाइँ भएको हो ।